Ukukhangela okumangalisayo kweWordPress kunye neplagi yefayile- WPSOLR
I-Addons (ii-plugins, imixholo, amanqaku)
kodwa LUTHI uphando lwakho?
Ke sinikele ubomi bethu ekutyhaleni imida yokukhangela isayensi ukwenza olona phando lubalaseleyo lwaziwayo ngumntu: WPSOLR
umsele wegama lokukhangela
Yenza ukuba ukhangelo lwakho lukhawuleze kwaye lubukrelekrele
Iilwimi ezingama-50 + ezichazwe kwangaphambili
Ukusebenza okungalinganiyo kunye ne-Elasticsearch, Solr, okanye iAlgolia
WooCommerce, bbPress, WPML, Polylang, ACF PRO, Toolset, Yoast kunye nokunye
Khawulezisa iplagi yakho yegridi oyithandayo: Isiseko, ukuJongwa kweZixhobo
I-AI yemibhalo kunye nemifanekiso
Iidemo ezingama-20 + kuyo yonke imixholo ephambili
Amashishini amancinci kunye nehlabathi
Yongeza amakhulu amanqaku kuphando lwakho
Yima, ubusazi ukuba ezintathu zobuchwephesha ezikumgangatho wehlabathi zilawula ukukhangela?
- Apache Solr (INetflix, iSlack, iCursera)
- Algolia (ITwitch, Medium, Brilliant)
Ngeplagin yethu, ungazisebenzisa zonke. Akukho sidingo sokuba yingxilimbela yokufumana ukukhangela okumgangatho wehlabathi kwakhona.
WooCommerce yokukhangela iplagi
Iplagi yokukhangela yeWordPress
Iplagi yokukhangela yeAlgolia
Iplagi yokukhangela ye-Elasticsearch
SolR yokukhangela iplagi
Iplagi yokukhangela yomlingisi
Isiqinisekiso seWPSOLR "WPML-Ready"
Iplagi yokukhangela yePolylang
bbPress iplagi yokukhangela
Iplagi yokukhangela yoast
Konke kwi-plugin enye ye-SEO yokukhangela
Iplagi yokukhangela ye-ACF
Umbono weGoogle plugin yokukhangela
I-plugin yoPhendlo loLwimi lweNdalo kuGoogle
Ukukhangelwa kweAmazon ukukhangela iplagi
Ukuqonda iplagi yokukhangela kwiAmazon
Isixhobo sokukhangela izixhobo
Ukukhangela kwe-AI-Kuza kungekudala
I-AI / i-Neural / ukuFunda okunzulu / uPhando lweSemantic
Umbuzo kunye neempendulo: Ukuhamba kwengxoxo kaGoogle
Incoko AI: IRASA
Iinguqulelo kunye nokushumeka kwe vector: BHALA, I-GPT-3, isicatshulwa esikhawulezayo
Ukufunda okunzulu, aka Artificial Intelligence, aka Neural Networks, ikwindawo yonke ngoku: ukusuka kuguqulelo oluzenzekelayo, ukuya kwisicatshulwa esine-GPT-3.
Kodwa ukukhangela kuchaphazeleka nakulo mkhwa. Isizukulwana esitsha ekuthiwa yi "Vector search" iilayibrari okanye iinkonzo ziyavela. Kodwa ikhonkco elilahlekileyo alikho ukubenza ukuba bamkelwe ngokubanzi: ukulula kunye nexabiso eliphantsi.
I-WPSOLR ijonge ukuba yile khonkco ilahlekileyo, ngokuzisa ezo zinto zingaqhelekanga kwiWordPress kunye neWooCommerce, njengoko yenzayo kwi-Elasticsearch, Solr kunye neAlgolia.
Olunye uphando lwe-neural, ukufana kwe-neural, umthombo ovulekileyo okanye iinkonzo ezilawulwayo, eziqhutywa yiWPSOLR ngoku:
Ukusekwa kwakhona kwe-OpenAI (ukulungela i-beta)
Injini yokutshatisa iVertex
Ezinye zezinto esingathanda ukuzisa kwiWordPress:
Iimodeli zamva nje: Sebenzisa zonke iimodeli ezisekwe kutshintsho (umzekelo, i-BERT, iRoBERTa, iMiniLM) yokuqinisekisa umgangatho wokuqinisekisa, ukuqinisekiswa komgangatho wokuvelisa kunye nokufunyanwa kwamaxwebhu.
Iimodyuli: ukhetho oluninzi ukuze ilingane isitaki sakho setekhnoloji kunye nemeko yokusebenzisa. Khetha i-database yakho oyithandayo, isiguquli sefayile, okanye isakhelo sokubonisa.
Vula: 100% iyahambelana neHuggingFace yemodeli hub. Vala ujongano nezinye iinkqubo-sikhokelo (umz. Abaguquli, iFARM, isiguquli sesigwebo)
Ukwahlulahlula: Isikali kwizigidi zamaxwebhu ngokufumana kwakhona, imveliso elungele ukubuyela umva njenge-Elasticsearch / i-FAISS, iGoogle ilatests ANN algorithms, kunye ne-top-notch Vector yolwazi.
Ukuphela-ukuphela: zonke izixhobo kwindawo enye: ukuguqulwa kwefayile, ukucoca, ukwahlula, ukuqeqesha, ukuvavanya, ukuthobela, ukubhala iilebhile, njl.
Umqambi onobuhlobo: kulula ukulungisa ingxaki, ukwandisa kunye nokuguqula.
Ngokwezifiso: hlengisa iitemplate kwindawo yakho okanye usebenzise iStoreStore sakho esisesikweni.
Ukuqhubeka kokufunda: Qokelela idatha yoqeqesho evela kwinkcazo yomsebenzisi kwimveliso kwaye uphucule iimodeli zakho
Fumana iindaba zamva nje ngokuza ngokukhawuleza kwe-AI yeWPSOLR
Nceda uhlengahlengise amabala abekiweyo ezantsi.
1, yinyani, 6, i-imeyile ekhokelayo, 2
I-1, iyinyani, i-1, iGama lokuQala, i-2
I-1, iyinyani, i-1, igama lokugqibela, i-2
Iwebhusayithi yakho *
1, yinyani, 9, iwebhusayithi yakho, 2
Qaphela: Luxanduva lwethu ukukhusela imfihlo yakho kwaye siyaqinisekisa ukuba idatha yakho iya kuba yimfihlo ngokupheleleyo.
Nyaniseka ngalo lonke ixesha
Ukwenziwa kweeLwimi zeNdalo
Izithethantonye zeDynamic ezivela kwi-AI
Ukunikezela amandla kwakhona kwi-AI
Icebo lokucoca ulwelo Widgets (isilayida, khetha2, isikhethi sombala…)
Khangela iDeshibhodi yedatha
Kwaye ngenxa yokuba ukukhangela kufuna idatha yokwenyani, sele siyenzile izihlanganisi kwiiplagi ezisetyenziswa kakhulu.
Sebenza ngaphandle komthungo kunye WooCommerce, bbPress, Inkqubo ye-ACF, Ukujonga isixhobo, WPML, Polylang, Yoast SEO, Kunye nezinye ezininzi.
Singakwakhela enye ukuba ikho imfuneko.
Hambisa ukuchaneka okungcono kweWooCommerce kunye nezinye iiplagi
Ividiyo yeAlgolia typo iingcebiso
Unokuzama idemo ebukhoma ngokunyamezelana kohlobo oluthile kunye neenkalo >>
Yintoni i-studio ye-Dev WPSOLR?
zeStudiyo I-WPSOLR liqela elingasemva kweWPSOLR, iplagi yethu yokukhangela yeflegi yeWordPress kunye neWooCommerce.
Isitudiyo sinika iminyaka yamava kuphuhliso kunye noqwalaselo lwe:
Thenga kwi-WordPress kunye neengcali zoPhando
Wenza ntoni uDa studio I-WPSOLR ?
Iplagi yethu yokukhangela ye-WPSOLR mhlawumbi yeyona iguqukayo kunye nesikali emarikeni. Ingena kwi-99% yeemfuno zabathengi bethu.
Kodwa ngamanye amaxesha, umntu ufuna isandla esongezelelweyo ukuze afumane amava afanelekileyo.
Yakha kwakhona indawo yakho yonke ukufikelela ngcono seo kwaye guquka
Sebenzisa i-Elementor Pro, i-ACF Pro, kunye nentwana ye-PHP / JS / CSS ukwakha nayiphi na iplagi yesiqhelo (CRM, indawo yabathengi yabucala, ubulungu,…)
Yakha uPhendlo olutsha kunye neefilitha ze-UI
Bhala kwaye uqhagamshele umbuzo okwenziwe ngokwezifiso
Ukuhambelana kwesantya kunye nenqanaba lesiko
Nxibelelana nathi kuwo wonke umsebenzi wakho wesiko
Sebenzisa uMcimbi - Yenza ukhangelo lweMyListing lubhabhe kunye noludwe lwesigidi
Omnye umthengi we-MyListing weza kuthi kuba isiza sakhe sasingakwazi ukujongana nokudweliswa kwezigidi zakhe.
Ayisiyo kuphela ukukhangela okucothayo, kodwa kunye nephepha lasekhaya kunye neesemaps zaseJoast.
Silutshintshile ugcino lwethu lwe-MyListing, kwaye ngoku indawo yabathengi iyabhabha, nokuba uluhlu lwesigidi.
Khawulezisa uLuhlu lwam kunye neminye imixholo
Sebenzisa uMcimbi - Ukuphucula ukuchaneka kweziphumo zophendlo lwe-MyListing
Umxhasi we-MyListing weza kwiStudio yethu kuba akafumananga ludweliso ngokuchaneka ngokwaneleyo: ezinye iindawo zesiko apho zingakhange zikhangelwe kwaphela.
Kwafuneka sakhe isongezo esipheleleyo, kuba i-MyListing ayisebenzisi ukukhangela okugcinwe kwindawo yokugcina okugciniweyo.
Ngoku, ngesongezo esitsha, iindwendwe zethu zingakhangela kuzo zonke iinkcukacha ezinxulumene noluhlu.
Hambisa ukuchaneka okungcono koLuhlu lwam kunye neminye imixholo
Sebenzisa uMcimbi - Khipha imifanekiso engama-4,000 yemifanekiso evela kwindawo yokutya yaseFrance
Umthengi uthathe imifanekiso engama-4,000 yeemveliso zeVenkile.
Iimveliso zithunyelwa ngaphandle (zivumelanisiwe) ukusuka kwifayile ye- UKezia II isoftware ebhalisa imali, kwivenkile yeWooCommerce “IMagasin Bio e La Teste de Buch".
Imifanekiso ke ilayishwa kwithala leendaba.
Ungayidibanisa njani imifanekiso nezihloko zemveliso, ukuze ulayishe umfanekiso ochanekileyo kwigalari yemifanekiso?
By ukukhupha isicatshulwa somfanekiso (i-OCR), usebenzisa iWPSOLR yokongeza kwi Umbono weGoogle API.
Emva koko isalathiso se-mages kwi-Elasticsearch kunye neetekisi zabo ze-OCR.
Emva koko, ukuvula ilayibrari yeendaba kunye nokukhangela i- "Wine Bordeaux 2019" ibuyisela imifanekiso ekufuneka incanyathiselwe kwimveliso ehambelana nayo.
Khangela imifanekiso ngobuGcisa bobuGcisa
Sebenzisa uMcimbi - isikhundla ngokwezifiso
Umthengi uza kuthi kuba eqonda ukuba ukukhangela kwakhe kuhlala kubekwa kwizikhundla ezindala kwizikhundla zokuqala. Yeyiphi engalunganga ngephepha ndaba.
Kwelinye icala, ukulungisa ngomhla kwakubonisa iiposti ezingafanelekanga kwizikhundla zokuqala.
Ke, sakhela isongezo esitsha ngokusekwe kumgangatho wokubola we-Elasticsearch. Eli nqaku lenza ukuba zikwazi ukubeka iziphumo ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo kunye nemihla yazo. Nokuba kungcono, ukuchaneka komyinge / umhla unokulungiswa kakuhle kumlawuli we-WPSOLR.
Lungisa iziphumo zophando kwiimfuno zakho
© 2020 wpsolr.com. Onke Amalungelo Agciniwe.